Step One : Boot Loader Unlock Tool Latest Download လုပ်တာကနေ အရင်စရပါမယ်
Unlock Tool က Install လုပ်စရာမလိုပါ။ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Archive file ကို System Drive ဖြစ်တဲ့ D:\_ သို့သာ ကူးထည့်ထားပါ။ အဲသည် Location မှာပဲ ဖြည်ချတာလုပ်ပါ။ အဲလိုဆို Driver တွေ Install တာ..၊ ဖုန်းကို Detect တာတွေ ကောင်းကောင်းပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ပြီး Firmware ရေးတာမလုပ်ဖူးရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ADB,Fastboot Drivers တွေကို Unlock Tool မှာပါတဲ့ Driver Installer ကနေလုပ်ဆောင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံများကိုလေ့လာပြီး လိုအပ်တဲ့ USB Drivers တွေကို Install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်း ကြည့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
D:\_ ထဲကို ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ zip file ကူးထည့်ထားမယ်။ ကျနော်ကတော့ WinRAR ထည့်ထားလို့ အဲလိုတွေဖြည်မယ်ဆို Right Click ကို file ပေါ်နှိပ်တာနဲ့ WinRAR က လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Options ေတွပေါ်လာပါတယ်။ Windows7နဲ့ နောက်ပိုင်းတွေဆိုလဲ Zip file တွေကို ဖြည်ပေးနိုင်တဲ့ default feature ပါပါတယ်။ Right Click နှိပ်တာနဲ့ပေါ်လာမှာပါပဲ။ Extract Here.. ဆိုတာရွေးလိုက်ရင် D:\_ ထဲမှာ ပွစာကျဲနေအောင် ဖြည်သွားမှာပါ။ သူကလာတာ Folder တစ်ခုကို zip လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမလာပါ။ files, folders တွေကို zip ထားတဲ့ပုံစံနဲ့လာတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် zip file name အတိုင်း Folder တစ်ခုဆောက်ပြီး ဖြည်ချပေးမယ့် အောက်က Options ကိုရွေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြား software တွေနဲ့ဖြည်ရင်လဲ Extract Here.. Extract Now.. Extract All.. ဆိုတာတွေကိုမရွေးပဲ ကိုယ့် file နာမည်အတိုင်း folder ဆောက်ပေးမယ့် Option ကိုရွေးဖြည်ပါ။ Folder ဖြည်တာ ရလာပြီဆိုရင်တော့ အဲသည်ထဲကိုဝင်ပါ။ Drivers တွေ Install လုပ်ဖို့ driver folder ထဲက သက်ဆိုင်ရာ Windows Version folder ထဲကိုဝင်ပါ။ ကျနော်ကတော့ Windows 10 မို့ win10 အောက်ကိုဝင်ပါတယ်။ အဲသည်အောက်မှာ android_winusb.inf ဆိုတဲ့ file လေးရှိပါတယ်။ အခြား Windows versions များအောက် folder မှာလဲ ထို inf file ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို Right Click နှိပ်ပြီး Install ဆိုတာနှိပ်ပါ။ အချိန် ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ရင် Completed Successfully ဆိုတာပေါ်လာပါပြီ။ ဒါဆိုရပါပြီ။ Drivers တွေ Install လုပ်တာပြီးပါပြီ။ ကိုယ့် Computer က ကိုယ့်ဖုန်းကို Fastboot mode မှာ သိနေ မနေစမ်းကြည့်ချင်ရင်တော့ ဖုန်းကို Power ပိတ်ထားပါ။ Vol Down + Power Key ကိုတွဲပြီး ကြာကြာလေးနှိပ်ထားပါ။ Fastboot mode ကိုရောက်ပါမယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ USB Cable နဲ့ချိတ်ပါ။ Computer Device Manager မှာ အောက်ပါပုံအတိုင်း boot loader device တစ်ခုတွေ့တယ်ဆို OK ပါပြီ။ Device နာမည်ရှေ့ icon ပေါ်မှာ အဝါရောင် ? ၊ တြိဂံပုံ စတာတွေ ပေါ်မနေရပါ။ ပေါ်နေရင်တော့ ဖျက်ပြီး Driver Installation ကို ပြန် try ပါ။ မိမိကွန်ပျူတာမှာ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ driver မျိုးစုံတင်ထားဖူးရင် conflict ဖြစ်နိုင်ချေတွေ လိုက်စဉ်းစားလို့သာ troubleshoot ပါ။
Step Two : Developer Options ထဲမှာ Account bind တဲ့ကိစ္စကို ပြင်ဆင်ရအောင်..
Step Three : Mi Unlock Tool နဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်တာ လုပ်ပါမယ်။